Mareykanka oo ay muuqato in uu dano gaara ah ka leeyayey Soomaaliya (Aragti)
Kooxaha Islaamiga Ah:
Usama Bin Ladin oo ah hogaamiyaha Al-Qacida ayaa ciidamada sirdoonka ee Maraykanku marmar ku xantaan in uu dhawr jeer tagay dalka Somaliya intii uu soconayay dagaalka sokeeye, waxayna sheegeen in ciidankiisu imika ka dagaalamaan gudaha Somaliya, iyagoo ku kala biiray kooxaha Jihaadka ka wada gudaha Somaliya, balse badankoodu ku jiraan kooxda Al-Shabaab.
(Waxaan ugu baaqaynaa Masuuliyiinta Somalida inay iska xoreeyaan Ciidamda Itoobiyaanka ee kusoo duulay dalka Somaliya, oo ay kusameeyaan qaraxyo bambaano, weeraro, iyo wixii kale oo ay dalkooda kaga xorayn karaan cadwoga kusoo duulay dalkooda). (Shabaabka Somaliyeed waxaan ku booriyeeynaa inay la dagaalmaan Cadwoga sida ay kula dagaalmaan Shabaaka Ciraaq,Afganistaan, oo ay dhibaato xoogle ay soo gaarsiyaan maalin walba cadowga kusoo duulay dalkooda).
Sidaa waxa yiri Ayman Al-Zawahiri oo ah kuxigeenka koobaad ee Usama Bin Ladin, hadalkaas oo ahaa cajalad uu iska soo duubay Ayman Al-Zawahiri oo laga sii daayay Terlefishanka Al-Jazeera.
Maanta Soomaaliya wali ma laha Dowlad dhexe amaba cudud adag oo ay wax ku maamusho, waxaana loo arkaa in ay dhici karto in ay noqoto meel ay ku dhuuntaan howlfuliyayaasha ama taageerayaasha al-Qaacida ee ka soo cararay Afghanistan, waxaana soo baxaya hadda in Maraykanku uu dano cusub ka leeyahay Soomaaliya.
Koonfurta Somaliya imika %63 gacanta waxa ku haya kooxaha kasoo horjeeda Dawlada Federalka ee Somaliya, maalinba maalinta ka danbaysa waxaa sii wiiqaysa amaba dhulka sii galaysa awooda ay leedahay Dawlada Federalku maadama meelihii muhiimka ahaa badankooda ay haystaan Al-Shabaab iyo Maxkamadahu.
Sidoo kale, dhimashada ay sii kordhaysa dagaalkuna waa sii holcaya oo malaha waxaaba marmarka qaar lagu sigta in gacanta lagu dhigo Gobolka Banaadir oo ah Gobolka ugu wax soo saarka badan leh waliba ugu dhaqaalaha badan leh Somaliya.
(Kadib isla markiiba dagaalka Afghanistan, waxaa cabsi xoog leh laga qabay in howlfuliyayaasha iyo xubnaha sare ee al-Qaacidda ay aadayaan Soomaaliya si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan oo ugu dhuuntaan," sidaasi waxaa yiri Jason Barke, oo qoray buugga Al-Qaacidda ee loogu macag daray, Casting a Shadow of Terror) hase yeeshee, Mr Burke wuxuu yiri ma dhicin taasi, ugu yaraan inta uu Maraykanku og yahay.
Douglas Lute oo ah ninka la shaqeeya Madaxweyne George W. Bush dhinaca siyaasada iyo arrimaha Afghanistan iyo Iraq ee ku saabsan Al-Qacida ayaa wuxuu saadaaliyay in dalalka Somalia, Ethiopia iyo Sudan ay noqon doonaan bartilmaameedyada dambe ee al-Qaacida ay tiigsan doonto, mar haddii ay ku adkaadeen hawlihii ay ka wadday dalalka Iraq iyo Afghanistan, haatan ay usoo guurayso dhinaca Geerska Afrika gaar ahaan Somaliya.
Dalka Jabuuti waxaa jooga 900 oo askari oo Mareykan ah oo loogu tala galay in ay ka hortagaan Al-Qacida in aysan galin badda cas. Sidoo kale, ciidamada Mareykanku waxay dalka Jabuuti ku tababaraan askarta Ethiopia iyo Eritrea, hase ahaatee shaqadii ciidamadaas Mareykanku ka qaban lahaayeen Somaliya oo kooxaha Islaamigu ay xoog ku yeesheen,waxaa ka hor jooga dalka Somaliya oo aysan ka jirin Dawlad dalka wada xukunta oo balan qaadi karta in ay la shaqayn doonto ciidamada Maraykanka.
Sidoo kale, 04 Agosto-2005, Ayman Al-Zawahiri, wuxuu Maraykanka ugu baaqay in ay ka wada baxaan dhamaan dalalka Muslimka ah ee ay ku jiraan, hadii kale ay la kulmi doonto dhirbaaxo ka wayn tii ay Vietnam kala kulantay.
Heshiiskan ay kala saxiixdeen DFKMG iyo Isbaahaysiga mucaardka ah ayaa Maraykanku u arkaa in ay tahay arrin siyaasad ku salaysan oo uu dhibaato ka iman karto, isagoo ula jeeda in Isbahaysigu yahay koox ka socota kooxaha Islaamiyiinta ah oo ay ka mid noqon karto kooxda Al-Qacida.
Sida la wada ogsoonyahay, Isbahaysiga dib u xoraynta Somaliya ayaa haatan laba garab u kala j abay oo waliba kala fikir duwan. Garabyadaas ayuu waliba Mareykanku u muuqdaa inuu u janjeero midka Jabuuti, oo uu hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Madaxweyne Cabdullahi Yusuf Axmed ayaa waligii balan qaadi jiray in uu kooxaha Islaamiyiinta ah kasoo horjeedo, Madaxwaynaha ayaa sheegay in uu ka sifeyn doono dalka Somaliya waxa uu ku tilmaamay argagaxisada amaba Al-Qaacida.
18-Maarso-2008 Waxay ahayd maalintii Al-Shabaab lagu daray liiska argagaxisada caalamiga ah, sido kale, sida lagu cadeeyay qoraal ay soo saartay Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka Condoleeza Rice, wa+xaa lagu xaaraantimeeyay in wax taageero ah haba yaraatee nooc kastaba ha ahaatee aan la siin karin Kooxda Al-shabaab isla markaana la xayiro wax kasta oo hanti ama danno ah ee ururkaasi uu ku yeelan karo waddanka Mareykanka.
Sheekh Abu Mansuur oo ah Afhayeenka Al-shabaab ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Maraykanku ku daray liiska argagaxisada caalamka.
Kooxaha Mooryaanta Ah:
Qaar badan oo aan la yaabay garasho xumadooda ayeey meelahaas waxay ka dhahaan, Mooryaan imika ma jirto oo wa ay dhamaatay! Kuwaasi waa kuwo hurda oon ogayn waxay saaka ku quraacdeen.
Haddaba Mooryaani iyadu maxay tahay? Mooryaan hadaad maqasho waa dadkeeni Soomaaliyeed ee dhaca iyo xasuuqa iyo dilka u gaystay shacabkii Soomaaliyeed waliba intii tabarta daran lahayd, oo caasimadii Muqdisho durduriyay sida geela, mooryaantu waxay soo shaac baxeen xilliyadii ay Caydiid iyo Calimahdi ay Muqdisho isku haysteen, ciidankii Caydiid ayeey Mooryaantan laguu sheegaya ku badnayd.
Mooryaantan laguu sheegi waa kuwii wax kasta oo dalku khayraad iyo manaafacaad lahaa burburiyay oo waxaan xitaa fakan fiilo, tuubo iyo wax kasta.
Dadkaas maanta Mooryaanta loo yaqaana waa dad wada ibtiloobay, oo mid aan xaaran, xatooyo, kufsi, dil iyo dhac ku ibtiloobeen uusan jirin.
Waxaa hubaal ah iney dadkaasi yihiin kuwo la haleeyay oo la qiimo tiray, oo aan inaba caaqibo iyo rajo dambe lahayn. Waxaa kaloo hubaal ah iney dadkaasi bulshadeena dawlad kastoo oo mustaqbalka ka dhalata, ay ku noqon doonaan dhibaato iyo qodax dhinac kaga mudan.
Waxaa kaloo iyana meesha ku jirta iney dadkaas Soomaaliyeed yihiin kuwo dil iyo dhibaato joogta ah u taagan oo maalin walba ay dhexdooda wax ka dhimanayaan iyaguna ay wax dilayaan.
Mooryaantu waa kuwii Toban iyo Shanta sano dalka iyo dadka nafta u keenay oo maarada loo waayay oo cid u bareerta la waayay, Dawlad laga dhisi kari waayay, Muqdisho dadkii foorariyay ee wax walboo taagnaa riday oo xitaa Madaxtooyadii dalka weeraray soo iyaga maaha?
Sanadkan maanta lagu jiro ee 2008 Mooryaantu waxay kusii badanaysaa meelaha uusan wax maamul ahi ka jirin sida Koonfurta Somaliya oo wakhtigan isaga ah ay lasoo daristay xaalad adag oon aduunka hore looga maqal laguna arag.
Mooryaantu waa kuwii masuulka ahaa dhiigii, xasuuqii, dilkii, halaagi iyoo foolxumadii ku habsatay magaalada xaasimada ah ee Muqdsiho oo 1991 ay gacanta ku hayeen kooxahan loo yaqaan Mooryaanta oo qabiil ahaan marka loo eego ay u badnaanayaay Beelaha Hawiye.